अभागीको लाहुर चक्र~ राम गीरी ॥ - Ek Jamarko
Home / विचार / अभागीको लाहुर चक्र~ राम गीरी ॥
अभागीको लाहुर चक्र~ राम गीरी ॥
लुट नै लुट छ देशै भरी । अभागी हरुको लागी स्वदेशी लुट हरु मध्ये पासपोर्ट बनाउँदा दलालको लुट देखी साहुको तमसुक सम्म लुटै लुट छ । अनि बिदेश उडाइदिन्छु भन्दै गाउँमा आउने झोले दलालको लुट बेग्लै । फेरी सरकारबाटै लुट्ने ठेक्का लिएर बसेका मेनपावरको लुट अझै ठुलो छ । यहा सम्म की श्रम स्विकृती र इन्स्योरेन्सको नाममा समेत लुट्छन यहाँ । परदेशीन लागेको अभागी लाई लुट्ने अन्तिम लुचाहा ट्याक्सी ड्राईभर हुन्छ जसले तिनसय को बाटो गुडाएर हजार अशुल्छ । हो यत्ती लुटाए पछि सुरु हुन्छ बिदेश यात्रा।
एयरपोर्टमा जहाजको बोर्डीड• पास समातेपछी लुटाईको एक तिहाई पिडा त्यही विर्षन्छ अभागी । उडेर विदेश जाने र बिदेशमा टन्न कमाउने सपना देख्ने स्थल हो मेरो देशको एयरपोर्ट । प्रतिक्षालय मा बसेर जहाज चढ्ने पालो कुरेको हरेक अभागी ले अहिले सम्म स्वदेशमा लुटाएको सम्पुर्ण कुरा विर्षन्छ त्यो सपनालयमा बसेर ।
जहाजको दैलो नखुल्दै घर बनाएको सपना देख्छ अभागी । ऋण तिरेको,नयाँ घर बनाएको, बाउ आमाको उपचार गरेको अनी छोराछोरी लाई राम्रो शिक्षा दिक्षा दिएको सपना समेत त्यही बसेर देख्छ विचरा । अनि जव जहाज को दैलो खुल्छ आफ्नो किस्मतको दैलो खुलेको संझेर हुरुरु जहाज भित्र पुग्छ ।
जव सितल र चिसो एयरपोर्ट बाट उडेको मान्छे हपक्कैको तातो भुंग्रो जस्तो एअरपोर्टबाट बाहिर निस्कन्छ । व्हास्स तातो बाफ सहितको हावा। सातै सुर्य एकै पटक उदाएको जस्तो घाम , अनी बल्ल निस्कन्छ अभागीको मुख बाट ...हे राम....!!
आज सम्म आफ्ना बाट र स्वदेशी बाट मात्र लुटीएको अभागीको लागी अब सुरु भो बिदेशी लुट । कम्पनीले सहमति गरे अनुसारको काम नदिएर लुट्छ । तलब र सेवासुबिधा नदिएर लुट्छ । समयमा तलब नदिएर लुट्छ । सानो तिनो गल्तीमा पनि तलब काटेर लुट्छ ।
यी सबै लुट बाट आजीत भएको अभागी कतिपय अवस्थामा आफ्नै गल्तीको कारण पनि लुटीन्छ । छुट्टीमा रंगीन पानीले लुट्छ । मायाको भोको बरा अभागी नयाँ मोबाईल किनेर फेसबुकमा बानी पर्छ । त्यसपछी फेसबुकमा भेट भाकी नानीले लुट्छीन । अब समय पूरा भयो । कमाएको केही छैन । घर जान जाने बेलामा पाउने सेवासुबिधा सहितको तलब नपाएर लुटाईमा पर्छ फेरी ।
जव घर जाने सपना देख्न थाल्छ तव बर्षौँ पछि घरपरिवारलाई भेट्ने र लाहुरे बनेर रमाइलो गर्ने सपनाले बिदेशमा लुटीएका सम्पुर्ष कुरा हरु माफ गर्छ ।
अनि जहाज चडेर सररररर एयरपोर्ट मा झर्छ लाहुरे बनेर ! त्यहा फेरी स्वदेशी लुट सुरु हुन्छ । एअरपोर्टमा कमाउन बसेका सरकारी दलालहरुको नाटक र लुटपाट पछि बाहिर निस्किँदा कपाल पालेका, कानमा मुन्द्रा लगाएकाहरु तँछाडमछाड गर्दै आउछन । दाइ यता, दाइ उता भन्दै च्याता च्यात तानातान गर्दै । हे भगवान! बल्ल बल्ल ट्याक्सीमा चड्यो, ड्राइभरले समान चडाउँदैन समान चडाउने छुट्टै दलाल। उस्ले त झन नेपाली पैसा नलिने रे, बिदेशबाट आउँदा त रियल/दिह्राम या डलर पो दिनु न भन्छ।
उस्लाई लुटाएपछी थोत्रो र पुरानो ट्याक्सी चडेर एअरपोर्ट गेटबाट बाहिर निस्कियो । दुई बर्ष पहिला भयंकर लाग्ने काठमाण्डौ शहर अहिले रोडहरु साना साना डोरी जस्ता। जताततै फोहोरमैला। घरहरु पनि होँचा र अस्तब्यस्त लाग्ने । हेर्दा हेर्दै होटेलमा आइपुग्यो। लाहुरे भने पछि ट्याक्सी भाडा पनि दोगुना अझ रातमा भए चारगुना बढी ... यता झन लुटै लुट हे प्रभु...!!!
होटल भित्र छिर्यो, लाहुरे देखेपछी साहुनीको मुस्कानै भिन्दै।डुङ्ग बसाएको एटेजबाथरुम कोठा त्यो पनि रिमोट कन्ट्रोल बिग्रेको टिभी सहितको। तातो पानी त भाग्यमा भए पो पाउनु । चिसो पानी पनि कहिले काहीं मिनिरल वाटरले काम चलाउन पर्ने। बेलुका सोद्दै नसोधी रंगिन पानी सुकुटी सहितको टेबलमा तयार। मुसुक्क मुस्काउँदै आउनुसन थाकेर आउनुभाको होला एसो नास्ता पानी गरेर आराम गर्नु। (लाग्थ्यो सित्तैमामा खान बोलाको हो कि) साहुनीको हाउभाउ देखेर नाई भन्नै नसकिने। रंगीन पानी जति पियो उति मीठो। पिउँदै जाँदा कति पियो भनेर उनै साहुनीको भरोसा।
भोलिपल्ट जिउ नै सिरिङ हुने बिलको पैसा लुटाएर माईक्रोबसमा पहिला भाडा सोध्दा मिलाएर दिनुन भन्छ। बिचबाटोमा पुगेर मान्छेको भाडा भन्दा दुईगुना धेरै समानको भाडा माग्छ। कति झगडा गर्नु, होस भो भनेर माईक्रोलाई लुटाए पछि, अब माईक्रो जाने रोडमै घर भए त ठिकै नत्र सुरु भो गाउँले जिपको यात्रा। लाहुरे भने पछि जिपवाले कति खुसी। आज लाहुरे आउँदै छ है भनेर थाहा पायो भने २/३ घन्टा कुरेरै भएनी बस्छ। किन भन्दा साधारण जिप भाडा भन्दा पाँच गुना ज्यादा भाडा लाहुरे संग असुल्छन। ताल परे रंगीन पानी पनि सित्तैमा लगाउन पाईने।
धुलो उडाउदै, गीत घन्काउँदै जिपवालालाई लुटाएपछि साँझ घर पुग्यो । लाहुरेले ल्याएको चकलेट खाने आशमा जम्मा भएका केटाकेटीहरुलाई चकलेट बाँड्यो। सकीयो यौटा अभागीको लाहुर यात्रा ... !!
~राम गीरी दोहा
अभागीको लाहुर चक्र~ राम गीरी ॥ Reviewed by Jamarko TV on जनवरी 09, 2017 Rating: 5